खुल्यो मलेसिया ! श्रमिकको सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने - chiyagaff
खुल्यो मलेसिया ! श्रमिकको सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने
माघ १, २०७८ माघ १, २०७८ Chiya GaffLeaveaComment on खुल्यो मलेसिया ! श्रमिकको सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने
काठमाडौँ — मलेसियाले नेपालसहित देशबाट श्रमिक भर्ना गर्नका लागि रोजगारदाताहरूले आवेदन खुला गर्ने भएको छ । मलेसियाका मानव संसाध’न मन्त्री सेरी साराभनानले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालसहितका स्रोत मुलुकबाट श्रमिक भर्ना प्रक्रिया छिट्टै खुला गर्ने जनाएका हुन् ।
विदेशबाट श्रमिक भर्नाका लागि रोजगारदाताले मानव संसाधन मन्त्रालयबाट अनुमति लिएपछि मात्रै म्यानपावर कम्पनीका लागि मागपत्र बनाउन पाइन्छ । रोजगारदाताले कुन देशबाट कति श्रमिक ल्याउने भनेर मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्छ ।
त्यो आवेदन लिने कार्य डेढ वर्षदेखि रोकिएको छ । मलेसियाले २०७६ को चैतको पहिलो सातादेखि नेपालबाट श्रमिक भर्ना गरेको छैन । मन्त्री सारभनानले आवश्यक श्रमिक मात्रै माग गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
मलेसियाले गत डिसेम्बर १० तारिख श्रमिकको अभाव भएको भन्दै स्रोत देशबाट कृषि, उत्पादन, सेवा, निर्माण र घरेलु श्रमिकमा श्रमिक आपूर्ति गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न १४ डिसेम्बरमा मापदण्ड (एसओपी) बनाएको थियो ।
एसओपीअनुसार मलेसिया पुगेपछि भने श्रमिकहरू सरकारबाट अनुमति प्राप्त क्वारे’न्टिनमा सात दिन बस्नुपर्नेछ । श्रमिकहरू क्वालालम्पुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्रै प्रवेश गर्न पाइनेछ । मलेसियाले श्रमिकको सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
नयाँ श्रमिक जान नपाएपछि मलेसियामा नेपालीको संख्या दिनहुँ घटिरहेको छ । नेपालसहित विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न नपाएपछि मलेसियामा अलेखबद्ध (गैर’कानुनी हैसियत) मा कार्यरत श्रमिकलाई कानुनी हैसियत प्रदान गरी रोजगार दिने नीति ल्याएको थियो । यो नीतिमा नेपाली श्रमिक आकर्षित हुन सकेनन् । कम्तीमा १० हजार अलेखबद्ध नेपाली श्रमिक स्वदेश फिरिसकेका छन् ।
मलेसिया र सिंगापुरले हवाइ यात्रुलाई क्वारेन्टाइन बस्न नपर्ने
मंसिर २, २०७८ मंसिर २, २०७८ Chiya Gaff
भदौ २४, २०७८ भदौ २४, २०७८ Chiya Gaff
असार २३, २०७८ असार २३, २०७८ Chiya Gaff